အရသာအဆန်းလေးတွေ မြည်းစမ်းချင်တဲ့ ယောင်းတို့အတွက် သခွားသီးအစာသွပ်ချက်နည်း - For her Myanmar
အဲ့လောက် အရသာရှိမယ်လို့တောင် မထင်ထားမိဘူး
သခွားသီးဆိုတာနဲ့ သုပ်စားမယ်၊ တို့စားမယ်လို့ပဲ မြင်ကြတယ်လေ။ တကယ်တော့ သခွားသီးလေးက ချက်တတ်၊ ထွင်တတ်မယ်ဆိုရင်တော့ ဟင်းလျာဆန်းဆန်းလေးနဲ့ စားကောင်းတာလေးတွေ ချက်လို့ရသတဲ့ ယောင်းရေ။
သခွားသီးအစာသွပ်ချက်နည်းလို့ ကြားလိုက်ရရင်တော့ အရသာရှိပါ့မလားလို့ တွေးမိမယ် ထင်တယ်နော်။ ဒါပေမဲ့ သခွားသီးရဲ့ အချိုအရသာလေးနဲ့ အသားရဲ့ အဆိမ့်အရသာလေး ပေါင်းလိုက်တော့ ထင်မထားလောက်အောင် စားကောင်းလို့ လျှာလည်သွားမယ့် ဟင်းလျာလေးပါ။
ဒီဟင်းချက်နည်းလေးက တရုတ်နိုင်ငံ စီချွမ်ပြည်နယ်ဘက်က ရိုးရာနည်းလေးတစ်ခုပါ။ ပြင်ဆင်ချိန်နည်းနည်းလေးပဲပေးရပြီး ချက်နည်းကလည်း ရိုးရှင်းပေမဲ့ တကယ်စားလို့ကောင်းပါတယ်။
Related Article >>> လွယ်ကူမြန်ဆန်တဲ့ ဂျပန်တိုဟူးလုပ်နည်း
သခွားသီး ၄ လုံး
စီချွမ် ငရုတ်ကောင်း (တစ်ဇွန်းရဲ့ ၄ ပုံ ၁ ပုံ)
ချင်း အနည်းငယ် (နုပ်နုပ်စဉ်းထား)
ကြက်သွန်မြိတ် အနည်းငယ် (နုပ်နုပ်စဉ်းထား)
အသား ၂၂၅ ဂရမ် (ကြိတ်ထား)
ပဲငံပြာရည် လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၄ ဇွန်း
ကော်မှုန့် ထမင်းစားဇွန်း ၁ ဇွန်း တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Related Article >>> ရွှေစိတ်ပျော်စေမယ့် သစ်သီးစုံသုပ်မွှေးမွှေးလေးကို အိမ်မှာ ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ?
သခွားသီးတွေကို အခွံခွာပြီး ၂ ခြမ်းခြမ်းထားလိုက်ပါ။ အစေ့တွေနဲ့ အချွဲတွေ ကုန်သွားအောင် ဇွန်းနဲ့ ခြစ်ထုတ်လိုက်ပါ။
သခွားသီးကို ဆားအနည်းငယ်နဲ့ ပွတ်ပြီး ဆေးပါ။ ဆားကို သခွားသီးတွေမှာ နှံ့အောင်နယ်ပြီး ၁၅ မိနစ်နှပ်ထားလိုက်ပါ။
သခွားသီးနှပ်ထားတဲ့အချိန်မှာ အိုးကို အပူပေးထားပြီး ငရုတ်ကောင်းကို ထည့်လှော်ပေးပါ။ အနံ့အနည်းငယ်ထွက်လာပြီဆိုရင် ပန်းကန်ထဲ ထည့်ပြီး အအေးခံထားပါ။ အေးသွားရင်တော့ ကြေသွားအောင် ထောင်းထားလိုက်ပါ။
အသားတွေကို ပန်းကန်ထဲထည့်ပြီး ချင်း၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ပဲငံပြာရည်၊ နှမ်းဆီ၊ ငရုတ်ကောင်း၊ ကြက်ဥ၊ ဆား နဲ့ ကော်မှုန့်တွေကို ထည့်ပြီး နယ်ထားလိုက်ပါ။
သခွားသီးတွေကို ရေစင်အောင်ပြန်ဆေးပြီး ခြောက်သွားအောင် အဝတ်နဲ့သုတ်လိုက်ပါ။ နယ်ထားတဲ့အသားတွေကို သခွားသီးထဲ အစာသွပ်ပေးပါ။ ပြီးရင်တော့ ပွက်ပွက်ဆူအောင် တည်ထားတဲ့ ရေနွေးပေါင်း အိုးထဲမှာ သခွားသီးတွေကို စီထည့်ပြီး အဖုံးအုပ် ပေါင်းထားလိုက်ပါ။
မိနစ် ၂၀ လောက်ပေါင်းပြီး အသားတွေ ကျက်မကျက်ကိုကြည့်ပါ။ မကျက်သေးဘူးထင်ရင် နောက်ထပ် ၁၀ မိနစ် ထပ်ပေါင်းပါ။
ပေါင်းပြီးသွားရင် သခွားသီးက ထွက်လာတဲ့ အရည်တွေကို နှမ်းဆီလက်ကျန်လေးနဲ့ ရောပြီး အနှစ်ဖြစ်လာအောင် အပူပေးထားလိုက်ပါ။
သခွားသီးအစာသွပ်တွေကို ၅ လက်မဆီအပိုင်းပိုင်းပြီး ပန်းကန်ထဲထည့်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ခုနက လုပ်ထားတဲ့ အနှစ်လေးကို အပေါ်မှာ ဆမ်းပြီး သုံးဆောင်လို့ရပါပြီနော်။
အဲ့လောကျ အရသာရှိမယျလို့တောငျ မထငျထားမိဘူး
သခှားသီးဆိုတာနဲ့ သုပျစားမယျ၊ တို့စားမယျလို့ပဲ မွငျကွတယျလေ။ တကယျတော့ သခှားသီးလေးက ခကျြတတျ၊ ထှငျတတျမယျဆိုရငျတော့ ဟငျးလြာဆနျးဆနျးလေးနဲ့ စားကောငျးတာလေးတှေ ခကျြလို့ရသတဲ့ ယောငျးရေ။
သခှားသီးအစာသှပျခကျြနညျးလို့ ကွားလိုကျရရငျတော့ အရသာရှိပါ့မလားလို့ တှေးမိမယျ ထငျတယျနျော။ ဒါပမေဲ့ သခှားသီးရဲ့ အခြိုအရသာလေးနဲ့ အသားရဲ့ အဆိမျ့အရသာလေး ပေါငျးလိုကျတော့ ထငျမထားလောကျအောငျ စားကောငျးလို့ လြှာလညျသှားမယျ့ ဟငျးလြာလေးပါ။
ဒီဟငျးခကျြနညျးလေးက တရုတျနိုငျငံ စီခြှမျပွညျနယျဘကျက ရိုးရာနညျးလေးတဈခုပါ။ ပွငျဆငျခြိနျနညျးနညျးလေးပဲပေးရပွီး ခကျြနညျးကလညျး ရိုးရှငျးပမေဲ့ တကယျစားလို့ကောငျးပါတယျ။
Related Article >>> လှယျကူမွနျဆနျတဲ့ ဂပြနျတိုဟူးလုပျနညျး
သခှားသီး ၄ လုံး
စီခြှမျ ငရုတျကောငျး (တဈဇှနျးရဲ့ ၄ ပုံ ၁ ပုံ)
ခငျြး အနညျးငယျ (နုပျနုပျစဉျးထား)
ကွကျသှနျမြိတျ အနညျးငယျ (နုပျနုပျစဉျးထား)
အသား ၂၂၅ ဂရမျ (ကွိတျထား)
ပဲငံပွာရညျ လကျဖကျရညျဇှနျး ၄ ဇှနျး
ကျောမှုနျ့ ထမငျးစားဇှနျး ၁ ဇှနျး တို့ပဲဖွဈပါတယျ။
Related Article >>> ရှစေိတျပြျောစမေယျ့ သဈသီးစုံသုပျမှေးမှေးလေးကို အိမျမှာ ဘယျလို လုပျကွမလဲ?
သခှားသီးတှကေို အခှံခှာပွီး ၂ ခွမျးခွမျးထားလိုကျပါ။ အစတှေ့နေဲ့ အခြှဲတှေ ကုနျသှားအောငျ ဇှနျးနဲ့ ခွဈထုတျလိုကျပါ။
သခှားသီးကို ဆားအနညျးငယျနဲ့ ပှတျပွီး ဆေးပါ။ ဆားကို သခှားသီးတှမှော နှံ့အောငျနယျပွီး ၁၅ မိနဈနှပျထားလိုကျပါ။
သခှားသီးနှပျထားတဲ့အခြိနျမှာ အိုးကို အပူပေးထားပွီး ငရုတျကောငျးကို ထညျ့လှျောပေးပါ။ အနံ့အနညျးငယျထှကျလာပွီဆိုရငျ ပနျးကနျထဲ ထညျ့ပွီး အအေးခံထားပါ။ အေးသှားရငျတော့ ကွသှေားအောငျ ထောငျးထားလိုကျပါ။
အသားတှကေို ပနျးကနျထဲထညျ့ပွီး ခငျြး၊ ကွကျသှနျမွိတျ၊ ပဲငံပွာရညျ၊ နှမျးဆီ၊ ငရုတျကောငျး၊ ကွကျဥ၊ ဆား နဲ့ ကျောမှုနျ့တှကေို ထညျ့ပွီး နယျထားလိုကျပါ။
သခှားသီးတှကေို ရစေငျအောငျပွနျဆေးပွီး ခွောကျသှားအောငျ အဝတျနဲ့သုတျလိုကျပါ။ နယျထားတဲ့အသားတှကေို သခှားသီးထဲ အစာသှပျပေးပါ။ ပွီးရငျတော့ ပှကျပှကျဆူအောငျ တညျထားတဲ့ ရနှေေးပေါငျး အိုးထဲမှာ သခှားသီးတှကေို စီထညျ့ပွီး အဖုံးအုပျ ပေါငျးထားလိုကျပါ။
မိနဈ ၂၀ လောကျပေါငျးပွီး အသားတှေ ကကျြမကကျြကိုကွညျ့ပါ။ မကကျြသေးဘူးထငျရငျ နောကျထပျ ၁၀ မိနဈ ထပျပေါငျးပါ။
ပေါငျးပွီးသှားရငျ သခှားသီးက ထှကျလာတဲ့ အရညျတှကေို နှမျးဆီလကျကနျြလေးနဲ့ ရောပွီး အနှဈဖွဈလာအောငျ အပူပေးထားလိုကျပါ။
သခှားသီးအစာသှပျတှကေို ၅ လကျမဆီအပိုငျးပိုငျးပွီး ပနျးကနျထဲထညျ့ပါ။ ပွီးရငျတော့ ခုနက လုပျထားတဲ့ အနှဈလေးကို အပျေါမှာ ဆမျးပွီး သုံးဆောငျလို့ရပါပွီနျော။
Tags: Chinese, Cucumber, curry, easy, Recipe, salad